Model / Singer Pooja Lama
Topic: Model / Singer Pooja Lama
Author Topic: Model / Singer Pooja Lama (Read 37929 times)
« on: July 08, 2009, 11:22:51 PM »
Will try to add details on the first model who dared to bare it all in modeling shot... and haven't heard much about her these days.
« Last Edit: July 20, 2009, 11:45:08 AM by tundikhel »
Re: Model Pooja Lama
« Reply #1 on: July 08, 2009, 11:22:58 PM »
« Reply #2 on: July 08, 2009, 11:35:39 PM »
« Reply #3 on: July 08, 2009, 11:36:43 PM »
पूजाका अनुसार दिनेशले उनलाई आफू विवाहित भएको कुरा ढाँटेका थिए । पूजाले भनिन्- 'उसकी श्रीमतीसँग पनि टेलिफोनमा मेरो कुराकानी भयो । उनी रिसाइनन्, बरु आफ्नै श्रीमान्लाई दोष दिँदै विगत १५ वर्षदेखि यस्तै प्रकारले दुःख दिँदै आएको कुरा गरिन् । उनीहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो थियो मलाई थाहा थिएन, तर दिनेश विवाहित भएको थाहा पाएपछि उसले श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको र मलाई निकै माया गर्ने कुरा बताएर फेरि ढाँट्यो । म उसको कुराले पग्लिएँ । त्यही नै मेरो भूल थियो ।'
गत वर्ष पूजा सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा चीन गइन् । झन्डै एक वर्षपछि उताबाट र्फकंदा यहाँ माघ १९ को राजाको घोषणाका कारण टेलिफोन, मोबाइल आदि बन्द थियो । दिनेश र पूजाको सम्पर्क हुन सकेन । तर जब टेलिफोन खुल्यो, दिनेश र पूजाको भेटले निरन्तरता पायो । ग्य्रान्डलगायतका डान्सपार्टीहरूमा उनीहरू नाचिरहेका देखिन्थे । एवार्ड कार्यक्रमहरूमा पनि उनीहरू साथै जान्थे । ती तस्बिरहरू पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशित भए । पूजाको परिवारका सदस्य अनि स्वयं पूजा दिनेशसँग विवाह होस् भन्ने प्रयासमा थिए । दिनेशले भने त्यो कुरालाई त्यति वास्ता गरिरहेका थिएनन् । गत दसैंमा टीका लगाउन बोलाएर र्‍याखर्‍याख्ती पारेपछि पूजाको परिवार दिनेशलाई विवाहका लागि राजी गराउन सफल भयो । मूलढोकामा ताल्चा लगाएर उनलाई राति त्यहीं सुताइयो । मध्यरातमा सबैजना मस्त निदाएको मौका छोपेर दिनेश पर्खाल नाघेर भागेछन् ।
त्यो घटनापछि निकै दुःखी भएकी पूजाले मृत्युवरण गर्ने निधो गरिन् । असोज २९ गते साँझ उनले ठमेलको एउटा रेस्टुराँमा थुप्रै स्लिपिङ ट्याबलेट खाइन् । उनलाई उनका साथीहरूले तुरन्तै वीर अस्पताल पुर्‍याए र बचाए । दिनेश त्यो अवधिमा अस्पताल पुगिरहन्थे । तर पूजा भने अब उनी मात्र होइन् कसैको पनि वास्ता नगर्ने बताउँछिन् । उनी ग्ल्यामर्स छवि र ओपन ड्रेस लगाउन अहिले पनि पछि पर्दिनन् । उनले आफ्नो ग्लयामर्स छविका बारेमा भनिन्- 'मलाई जे सजिलो लाग्छ म त्यही गर्छु । यो क्षेत्रमा लागेपछि ग्ल्यामर्स त देखिनै पर्‍यो नि ।' अब उनी गायनक्षेत्रमा क्यारियर बनाउन तल्लीन छिन् । उनी अबको एल्बम 'डि्रमगल्र्स' समूहबाट होइन, एकल स्वरमा निकाल्ने सुरमा छिन् । फेरि पनि कुनै युवक मन पर्‍यो र फेरि धोका पाइयो भने ? उनले आत्मविश्वास झल्काउँदै भनिन्- 'अब त्यो कथा दोहोर्‍याउन चाहन्नँ ।'
« Reply #4 on: July 08, 2009, 11:45:54 PM »
« Last Edit: July 09, 2009, 12:15:09 AM by tundikhel »
« Reply #5 on: July 08, 2009, 11:59:01 PM »
« Reply #6 on: July 09, 2009, 12:05:34 AM »
Two more Photos that sparked the controversy
« Reply #7 on: July 09, 2009, 12:06:35 AM »
« Reply #8 on: July 09, 2009, 12:10:25 AM »
She formedaband
Members: Pushpa Sunuwar, Pooja Lama, Chanda Lama
Re: Model / Singer Pooja Lama
« Reply #9 on: July 20, 2009, 11:45:33 AM »
पूजा लामा विगत १० वर्षन्दा लामो समयदेखि नेपाली कलाक्षेत्रमा लागिपरेकी छिन् । उनी यस क्रममा मोडल, नायिका र गायिका हुँदै अहिले खलनायिका (भिलेन) को भूमिकामा आउँदै छिन् । १० वर्षको यात्रामा विभिन्न समयमा विवादास्पद बन्दै आएकी लामा विविध विवादमा मुछिएर पनि यस क्षेत्रमा निरन्तर लागि परेकी छिन् । यिनी हाल लभस्टोरी २०६६ को अभिनयमा व्यस्त रहेकी छिन् । अंगप्रदर्शन दुइ तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने लामाका विचारमा अंगप्रदर्शन भल्गर र सेक्सी गरी दुइ प्रकारको हुन्छ । प्रस्तुत छ, यिनै लामासँगको छोटो कुराकानी :
० कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर के पाइयो जस्तो लाग्छ?
- नाम पाएँ, दाम पनि पाएँ सबैले चिन्छन् ।
० तपाइँलाई नायिकाभन्दा पनि मोडल भनेर चिन्छन् नि सबैले ?
- त्यो आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हो । म आफूले आफैंलाई भन्नुपर्दा म एउटा कलाकार हुँ ।
० तपाइँलाई नायिका वा मोडल केमा बढी सन्तुष्टि मिल्छ ?
- मैले भनिसकेँ म एउटा कलाकार हुँ । यो सबै एउटै फिल्ड हो । मोडलिङ्ग, एक्टिङ्ग, यो सबै एकै घरको काम हो ।
० मोडल, नायिका र गायनमध्ये कुनलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
- तीनवटैलाई दिन्छु ।
० नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आर्थिक सन्तुष्टि मिल्दैन भन्छन् नि ?
- अरूको बारेमा मलाई थाहा छैन मचाहिँ सन्तुष्ट छु ।
० चलचित्र क्षेत्रमा नाकियाको यौनशोषण हुन्छ भन्छन् नि ?
- त्यो मलाई थाहा छैन । मलाई पहिलेदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो परेको छैन ।
० पूजा लामालाई अभिनय गराउन गाह्रो छ भन्छन् नि ?
- त्यो मलाई थाहा छैन । डाइरेक्टरहरूलाई सोध्नुस् ।
० तपाइँ पटकपटक विवादमा आउनुहुन्छ किन ?
- सेलिब्रेटी, विवादमा मुछिनु स्वभाविक हो । सबैले चिन्छन् हामीले केही गर्यो कि विवाद हुन्छ ।
० अहिले दिनेश डिसीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?
- म यो कुरामा केही बोल्न चाहन्न । जसलाई मैले रद्दीको टोकरीमा फालिसकेँ, त्यसलाई म कोट्याउन चाहन्न ।
० ग्ल्यामर के हो जस्तो लाग्छ ?
- यो एउटा फेसन हो । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नो हातमा हुन्छ ।
० चलचित्रमा अंग प्रदर्शन कत्तिको आवश्यक छ ?
- सिन, सिचुयसन र कथाअनुसार सुहाउँदो हुनुपर्छ ।
० चलचित्रमा कलासंस्कृतिप्रति जोड दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
- संस्कृतिप्रति कसले पो जोड दिन्छ र ! देश चलाउने नेताले त दिँदैन भने हामीले किन ? तर पनि आइपरेको खण्डमा हामी देशका लागि ज्यान दिन सक्छौं ।
० तपाइँ अंग प्रदर्शन कतिसम्म गर्न चाहनुहुन्छ ?
- अंग प्रदर्शन मलाई सुहाउँछ, कथाले मागेअनुसार गर्छु यसमा भल्गर र सेक्सी भन्ने दुइटा चिज हुन्छ । भल्गर भनेको उत्ताउँलो छाडा र सेक्सी भनेको राम्रो सुहाउने । मचाहिँ सेक्सीसम्म दिन सक्छु ।
० लभस्टोरी २०६६ कस्तो चलचत्रि हो र त्यसमा तपाइँको भूमिका के हो ?
- यो प्रेम सम्बन्धी चलचत्रि हो । त्यसमा मेरो भूमिका भिलेन हो ।
० अन्तमा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- मलाई मन पराइदिनुस् म भन्दिन, मैले राम्रो गर्ने हो काम । राम्रो चिज दिने हो उहाँहरूको लागि ।